ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သူတော်စင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း”
သူတော်စင်...တဲ့။ အေပရယ်ဖူးလ် များလားဗျာ :8)
သဘောထား ကြီးလွန်းလို့ ဘေးထွက်ထိုင်နေတာပါဆို...
သူ့ကိုခေါင်းဆောင် လုပ်ခိုင်းရင်တောင် သူက မလုပ်ဖူးတဲ့။ သူက အာဏာလိုချင်တာ မဟုတ်ဘူးသိလား။ အခွင့်အရေးလောက်ပဲ ရရင်တော်ပါပြီတဲ့။ သိပ်တော်တာပဲနော် ဟိဟိ
အုန်းပွဲ ငှက်ပျော်ပွဲ အဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီဆရာ....
ဘယ်တော့ သွား ကန်တော့ဖို့ ပြင်ထားလဲ.... :)
I think he has every rights to say what he believes... It is pathetic to bash him while suckering whatever the opposition claims.
ကိုပေါရေ.. တန်ခူးကမေးနေတယ်။ ရွဲ့နေတာလားတဲ့။ ကျနော်ကူ ဖြေပေးလိုက်ရမလား။ ကိုပေါ ဒဲ့ နေတာ လို့။ :P
ဟားဟား .. ဟားဟား ..
ရယ်ပဲ ရယ်နေရတယ်ဗျာ ..
ရီ ရ တယ် ဗျို့ ။ ဗြဲ
အော်... ခါတော်မှီလည်း ဖားရတာပါဗျာ...ခွေးလွတ်လိုက် (အဲ မှားလို့) ခွင့်လွတ်လိုက်ကြပါဗျာ။